आप्रवासीलार्इ किन देख्नै सक्दैनन् ट्रम्प ? फेरि आप्रवासीमाथि शब्द प्रहार | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आप्रवासीलार्इ किन देख्नै सक्दैनन् ट्रम्प ? फेरि आप्रवासीमाथि शब्द प्रहार
आप्रवासीलार्इ किन देख्नै सक्दैनन् ट्रम्प ? फेरि आप्रवासीमाथि शब्द प्रहार
पुस २८ गते, २०७४ - ०९:०३
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दुईदलीय सहमतिका आधारमा ल्याइएको आप्रवासन सम्बन्धी एउटा सम्झौताको प्रस्ताव खारेज गर्ने क्रममा हेइटी र अफ्रिकी देशहरूबारे अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका छन् । ह्वाइट हाउसमा सांसदहरूसँग भएको बैठकका क्रममा ट्रम्पले किन ती देशका मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा आउन दिनुपर्यो भनि प्रश्न गरेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ओभल अफिसमा भएको बैठकका क्रममा उनले प्रयोग गरेको अशिष्ट शब्दले कतिपय सांसदहरूलाई नै चकित पारेको बताइएको छ । उनले हेइटी, एल साल्भाडोर र अफ्रिकी देशविरुद्ध नराम्रो शब्द प्रयोग गर्दै त्यहाँका भन्दा बरू नर्वेका मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा लिँदा हुने बताए ।
वासिङ्टन पोष्ट पत्रिकाका अनुसार रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक सांसदहरूलाई ट्रम्पले किन हामी यी काम नलाग्ने देशका मानिसहरूलाई यहाँ आउन दिने भनि प्रश्न गरेका थिए ।
उनले त्यसपछि स्पष्ट रुपमा किन नर्वेजस्ता देशका मानिसहरू यहाँ नआउने भनेका थिए । ट्रम्पले यसै साताको शुरूमा नर्वेका प्रधानमन्त्रीलाई ह्वाइट हाउसमा भेटेका थिए । क्यापिटल हिलका राजनीतिज्ञहरू आप्रवासन सुधार सम्बन्धी दुइपक्षीय सम्झौतालाई पुनर्स्थापित गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् ।
अमेरिकामा आप्रवासीको रुपमा अवैध रुपमा ल्याइएका बालबालिकाको कानूनी सुरक्षा पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास उनीहरूले गरिरहेका छन् । यसै हप्ता ह्वाइट हाउसमा भएको लामो बैठकलाई ट्रम्पले टेलिभिजनमार्फत प्रशारण गर्न अनुमति दिएका थिए । उनले अपमानजनक शब्दहरू भने बन्द कोठामा भएको बैठकमा प्रयोग गरेका थिए । बीबीसी
पुस २८ गते, २०७४ - ०९:०३ मा प्रकाशित